ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်တွေနဲ့ ပြည့်နှပ်နေတဲ့ The NUN ကြည့်ကြမယ်နော် ..... ဝုန်း..... ဒုန်း.... အား.......
Conjuring (2) ထဲက Demon NUN ကို Character တစ်ခုအနေနဲ့ သီးသန့်ခွဲထုတ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Horror ရုပ်ရှင် "The NUN"Annabelle (1) (2) နဲ့ IT ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ Gary Dauberman ကပဲ "The NUN" ကို ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကို Romania က Cârța ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အစပြုထားတယ် ။ Father Burke ဟာ Nun တစ်ယောက်ထူးဆန်းစွာသေဆုံးမှုကို စုံစမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့ နေရာကနေအခြေတည်ထား ပါတယ်။
Conjuring (1) နဲ့ (2) မှာ Lorraine Warrenအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Vera Farmiga ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ Taissa Farmiga ကို Sister Irene အနေနဲ့တွေ့ရမှာပါ။
Horor ကားမို့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရိပ်အငွေ့တွေ ခံစားရမှာ ကျိန်းသေတာပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် Nun ဘာကြောင့်သေခဲ့တာလဲ ? ဘာကြောင့်မကျွတ်လွတ်တာလဲ ? စတဲ့သိချင်စိတ်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိဆွဲခေါ်သွားမယ့် ကားကောင်းလေးပါ။
ဒါရိုက်တာ Corin Hardy
ဇာတ်လမ်းကြာမြင့်ချိန် 1h 36min